करोडौंको सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने चलखेल- प्रिन्ट संस्करण - कान्तिपुर समाचार
करोडौंको सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने चलखेल
अख्तियारको आदेश– मन्दिरको जग्गा व्यक्तिलाई दिनू
जेष्ठ १०, २०७३ भीम घिमिरे
पोखरा — सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई बेवास्ता गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले मन्दिरको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने बाटो खुला गरिदिएको छ ।
पोखरा–३ नदिपुरस्थित नारायणथान मन्दिरको साबिक छिनेडाँडा–१ हाल पोखरा १४ को कित्ता नम्बर ९७५ को ८ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गा रैकर (निजी) देखिएको भन्दै अख्तियारले गत वैशाख ९ मा गुठी संस्थानलाई पत्राचार गरेको हो । अख्तियारको उक्त निर्णयलाई आधार बनाई गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालयले नारायणथानको उक्त जग्गा पुजारी पुष्पराज लामिछानेको नाममा गरिदिएका छन् । उक्त जग्गलाई हाल चलनचल्तीमा १४ करोड रुपैयाँको हाराहारी पर्छ ।
कास्की मालपोतले दाबी प्रमाणअनुसार नै पुष्पराजको नाममा जमिन गएको दाबी गरेको छ । उक्त जग्गामा विवाद भएपछि संस्थानले रोक्का राखेकामा अख्तियारले फुकुवा गरिदिन पत्राचार गरेको थियो । अख्तियारको चलानी नम्बर २१८२ को पत्रमा भनिएको छ उक्त जग्गा रैकर भएकाले फुक्का गर्न भनिएको छ ।
अख्तियार र संस्थानको निर्णयले सार्वजनिक सम्पत्ति भूमाफियाको चलखेलका लागि खुला भएको भन्दै धार्मिक क्षेत्र विकास समिति असन्तुष्ट छ । ‘निजी जग्गा हो भनेर नामसारी गरिदिनुअघि सरकारी संस्थानले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण हो होइन राम्ररी अनुसन्धान नै गरिदिएनन्,’ समितिका अध्यक्ष महेश पराजुलीले भने, ‘निजी भनेर प्रमाण पुग्छ भने कुनै फरक पर्दैन तर, नारायणथानको सार्वजनिक सम्पत्तिलाई लिखतका सामान्य कमजोरी केलाएर निजीमा जान दिइयो । यो नजिरले यहाँ मात्रै होइन देशका अरू ठाउँमा पनि असर पर्छ ।’
कुनै पनि ठाउँमा मठमन्दिर र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा बसेकालाई खानबस्न सुविधा दिइनु उचित भए पनि संस्थाको सम्पत्ति नै उसैको हो भन्ने नजिर बनाइदिनु कानुनको खेलबाड भएको उनले बताए । कास्कीका मालपोत प्रमुख चिरञ्जीवी सापकोटाले भने लामिछानेका नाममा गएको जमिन निजी भएको प्रमाण पुगेकैले कानुनअनुसार भएको दाबी गरे । उनले भने ‘स्रेस्तापुर्जा, फिल्डबुक, धनीको बकसपत्र आदि सबै आधार केलाएर निर्णय भएको हो ।’ क्षेत्रीय प्रशासक शंकर कोइरालाले समितिले उक्त जग्गाबारे आफूकहाँ निवेदन दिए पनि आधिकारिक भनाइ राख्ने निकाय मालपोतमात्रै भएको बताए ।
ब्रहमचारीको मन्दिर व्यक्तिमा सर्दा नारायणथान मन्दिर बिस. १९३७ पूर्व फिरन्ता ब्रहमचारी गणेश गिरीले स्थापना गरेका हुन् । उनले भिक्षा माग्दै लक्ष्मीनारायणको थानसँगै मन्दिरका लागि १ सय २० मुरी खेत जोडेका थिए । मन्दिरको नियमित पूजाआजा स्थानीय देवीदत्त पाध्या पराजुलीलाई लगाएका उनको १९४३ मा निधन भएको थियो । गिरीको निधनपछि मन्दिरको नियमित कामकाज गर्दै पराजुलीले तत्कालीन शासनको नियमानुसार वि.सं. १९४४ असार १ मा ‘पुजारी तुल्याइपाउँ’ भनी सरकारलाई जाहेरी गरेका थिए । वि.सं. १९४५ पुस १ मा तत्कालीन श्री ३ महाराज वीरशमशेर र कमान्डर इन चिफ देवशमशेरबाट ‘सनद सवाल’ भएको थियो । उक्त कागजातमा सदाव्रत चलाई मन्दिर संरक्षणका लागि १ सय २० मुरी खेत उपभोग गर्ने अधिकार उनलाई दिइएको उल्लेख छ । यस्तै शासक फेरिएपछि उनले पुन: गरेको जाहेरीमा वि.सं. १९५८ जेठ ७ मा तत्कालीन श्री ३ महाराज देवशमशेर तथा कमाडर इन चिफ चन्द्रशमशेरबाट भएको ‘सनद सवाल’ मा पनि अघिल्लै आदेशलाई सदर गरिएको छ । पछिल्लो सनदमा पराजुलीका लागि मालपोतबाट पूजाआजाको खर्च पनि लिन सकिने उल्लेख छ ।
देवीदत्तको निधनपछि उनका दुई छोरा रुद्रनाथ र टीकानिधिले बाबुको जिम्मेवारी सम्हाले पनि छिटै दुवैको निधन भएको थियो । दुवैका छोरा थिएनन् । श्रीमतीहरू पवित्रा (रुद्रनाथ) र गंगा (टीकानिधि) लाई जिम्मेवारी आयो । तत्कालीन जनविश्वासअनुसार नारायणको पूजा पुरुष पुजारीले गर्नुपथ्र्यो । दुवैले नयाँ पुजारी बोलाउँदै अल्पकालीन काम लगाए । पवित्राकी छोरी लीलावतीको छोरा पुष्पराजलाई दुवै वृद्धाले लालनपालन गरे । अन्तत: मन्दिरको नियमित कामको जिम्मेवारी पुष्पराज लामिछानेमा सर्‍यो । २०३६ मा पवित्रा र २०६० मा गंगा दिवंगत भए । जिम्मेवारीसँगै उनले भोगचलन थालेको मन्दिरका सम्पत्तिमाथि आफ्नो पैतृक जेथाका रूपमा दाबी लिँदै आएका छन् ।
दुवै वृद्धाले आफ्ना शेषपछिको बकसपत्रमा सम्पत्तिको अधिकार पुजारी लामिछानेलाई दिएका छन् । यो आधारमा उनले २०५५ र २०५७ मा गरि ७/७ रोपनीका दुई कित्ता जमिन बेचेका थिए । दोस्रोपल्ट जमिन बेचिएपछि ‘नारायणथानको जमिन कसरी बेचियो ?’ भनेर समाजको भेला भयो । केही समय विवाद चल्दै, मत्थर हुँदै समाजमै कुरा नमिलेपछि २०६१ जेठ ३१ मा स्थानीय समाजसेवी तेजनाथ घिमिरेसहितका पाँचजनाले मन्दिरको जेथा संरक्षण गरिनुपर्छ भन्दै स्थानीय प्रशासनमा उजुरी दिए । प्रशासनले मालपोतलाई जग्गा रोक्का राख्न परिपत्र गर्‍यो ।
२०६१ साउन ३१ मा रुद्रनाथ अधिकारीको अध्यक्षतामा नारायणथान धार्मिक क्षेत्र विकास समिति गठन भयो । समितिले पनि पहिलो काम मन्दिरको सम्पत्ति व्यक्तिगत बनाई बेच्न नहुने भन्दै रोक्न स्थानीय प्रशासनलाई गुहार्‍यो । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्साल पनि उपस्थित समितिको बैठकमा मन्दिरको सम्पत्तिको खोजी गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो । एक महिनाभित्र जेथा खोजी गरी प्रतिवेदन बनाउन रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन गरिएको थियो । ‘पुरानो सनद सवालका कागजातलाई आधार बनाएर गुठी र मालपोतले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपथ्र्यो, गरिदिएन,’ पौडेलले भने, ‘हामीले खोजी गरेका सबै कागजात क्षेत्रीय प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, मालपोत र गुठी संस्थान सबैमा पुगेका हुन् ।’
समितिले सक्रियता बढाएपछि लामिछानेले आफू नारायणथान गुठीको आधिकारिक व्यक्ति भएकाले आफ्नो मन्जुरीबेगर गठित समिति अवैधानिक भएको भन्दै पुनरावेदनमा रिट दायर गरेका थिए । २०६९ फागुन ३ मा पुनरावेदनले पुजारी अवैधानिक भएकाले उनको हक नलाग्ने भन्दै विपक्षमा फैसला गरेको थियो । त्यसपछि लामिछाने सोही मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । न्यायाधीश कामु प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको इजलासले २०७१ फागुन ३ मा पुनरावेदनकै फैसला सदर गर्दै मन्दिरको जग्गा निजी गुठीको होइन भनेको थियो ।
सर्वोच्चको ०६९–सीआई–०५२२ नम्बरको फैसला मिसिलमा भनिएको छ– गुठी तैनाथी जग्गामा गुठी संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार रहने व्यवस्था गुठी संस्थानको ऐन, २०३३ को दफा २ (झ) मा रहेको छ । गुठी संस्थानले सो मन्दिरको पुजारी तोकेको वा सो मन्दिर र जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिएको पनि देखिँदैन । विवादित जग्गा र मन्दिर निजी गुठीको हो वा तैनाथी गुठीको भन्ने विषयको निरोपण प्रस्तुत निषेधाज्ञाबाट हुने विषय होइन । निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुनका लागि विवादित सम्पत्तिमा निवेदकको निर्विवाद हक स्थापित भएको हुनुपर्दछ । तर, निवेदन दाबीको जग्गा निजी गुठीको नदेखिई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको र तैनाथी गुठीको देखिएको हुँदा सो जग्गा र त्यसमा रहेको मन्दिरसमेतमा निवेदकको निर्विवाद हक स्थापित भएको मान्न मिलेन ।
नारायणथानको जमिन तैनाथी गुठीको नाममा भए व्यक्तिको नाममा जाँदैन र कसैले निजी प्रयोजनका लागि बेचबिखन गर्न पाउँदैन भनेर केही अगुवाहरू लामो समयदेखि लागेका हुन् । तर, यो प्रयासले निरन्तरता नपाउँदा बेलाबखतको झमेला बाहेक कानुनी आधारमा समिति बलियो हुन सकेको कागजातले देखाउँदैन ।
२०७१ भदौ ३१ मा उपमहानगरको कानुन शाखाकी प्रशासकीय अधिकृत कल्पना बरालले मालपोतलाई पत्र लेख्दै पुष्पराज लामिछानेले आफ्नो नाममा नामसारी मागेको जमिन उनको नभएको उल्लेख छ । २०३४ सालमा गण्डकी–धौलागिरीको सर्वेक्षणका लागि आएका गुठी संस्थानले गुठीका सम्पत्ति सर्वेक्षणमा खटाएका तत्कालीन अधिकृत निर्मलशमशेर लेखेको प्रतिवेदनमा नारायणथान पुजारीले निजी जसरी चलाएको र व्यक्तिगत सम्पत्तिका रूपमा भोग गरेको देखिएको उल्लेख छ । एउटा कित्तालाई आधार बनाएर अख्तियार र गुठी संस्थानले लामिछानेका नाममा नामसारी हुन सक्ने बाटो खोलिदिँदा नारायणथानको करिब ६० रोपनी हाराहारी जमिन अब बिस्तारै निजीकरण हुने नजिर भने स्थापित भएको छ ।
कसरी पुग्यो अख्तियारसम्म ?
लामो समयदेखि पुजारीले एकाधिकार गर्दै बेचबिखन गर्ने अवस्था देखेको नारायणथान धार्मिक क्षेत्र विकास समितिले स्थानीय प्रशासन गुहार्न र समाजमा भेला बोलाउने काम धेरैपटक गर्दै आएका उसका खातापाताले देखाउँछ ।
यसैबीच उजुरीकर्ताले गुठी तैनाथीको जग्गा गुठी संस्थाले निजी गुठीमा परिणत गर्ने प्रयास गरेका भन्दै कसैले अख्तियारमा उजुरी पठाएको थियो । लामिछानेको दाबीअनुसार त्यो उजुरी समितिभित्रैका कसैले गरेको हो । २०७० कात्तिकमा उक्त उजुरी पाएपछि अख्तियारले गुठी संस्थान र मालपोतलाई २०७१ असोजमा पत्राचार गरि सोध्यो । संस्थानले उक्त जग्गा मन्दिरको भएको नदेखिएको र पवित्राको बकसपत्रका आधारमा पुष्पराजको नाममा जान सक्ने देखिएको पत्राचार गरेपछि अख्तियारले पुन: गरेको पत्राचारमा ‘उक्त जग्गा गुठीको भएको नदेखिएको’ उल्लेख गरेको छ । गत वैशाख ५ को अख्तियारको पत्रपछि गुठी संस्थान र मालपोतले लामिछानेका लागि बाटो खुला गरिदिएका हुन् ।
यसअघि जिल्ला प्रशासनको पत्रानुसार रोक्का राखिएका जग्गाको लामिछानेले मालपोत बुझाएका छन् । ‘जेजे निर्णय भएको छ त्यो कानुनअनुसार छ’, उनले भने, ‘म पवित्राको नाति हो । उनको संरक्षण गरेकै हो । उनको सन्तानका नाताले सम्पत्तिमा मेरो अधिकार नभए कसको हुन्छ ?’ नारायणथान मन्दिर परिसरमा रहेको घरमा भेटिएका उनले भने, ‘मलाई सनद सवालको कुरा धेरैपछि थाहा भएको हो । मन्दिरको गुठीको जग्गा भनेर उल्लेख नै नभएको कागज देखाएर भएको किचलोले मैले पाएको दु:खको कसले हिसाब गर्छ ?’
प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७३ ०८:२५
जेष्ठ १०, २०७३ अखण्ड भण्डारी
काठमाडौं — टाउको हल्का दुख्यो भने पनि अचेल डाक्टर चाहिन्छ । पेट गडबड गर्नु हुँदैन, दौडाएर अस्पताल पुर्‍याउनुपर्छ । घरैपिच्छेजस्तो अस्पताल छन्, ऐय्या–आत्थु गर्दै बस्ने कुरा पनि भएन । त्यसमाथि हाम्रो शरीर जन्मिएदेखि नै खानाजत्तिकै औषधीमय भइसकेको छ, त्यही नलिई अब रुघासम्म निको हुँदैन ।
त्यसैले हरेकलाई पलपलमा नभई नहुने साथी हुन् डाक्टर साब । आउनुहोस्, तिनै डाक्टर साबका प्रकारमाथि एकछिन् चर्चा गरौं ।
१. लोकप्रिय डाक्टर साब– हामीकहाँ नभएका होइनन्, धेरै गतिला डाक्टर छन् । लोकप्रिय छन् । क्षमतावान् छन् । कुनै विशेष परिस्थितिमा ती अपरिहार्य छन् । त्यस्ता डाक्टर साबहरू क्रमश: व्यावसायिक पनि बनेका छन् । तीमध्ये अधिकांशका आफ्नै महँगा अस्पताल छन् । त्यहाँ जस्तातस्ताले आँट्न सक्दैनन् । मूल कुरो राज्यले तिनलाई सरकारी अस्पतालमा रोक्न सकेन । उनीहरूको जीवनस्तर सुहाउँदो सेवा/सुविधा, भूमिका र इज्जत दिन सकेन । फलत: उनीहरू आफ्नै संसारमा रमाउन थाले । त्यसैका लागि आफूलाई महँगा बनाए । ती सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा छन् ।
२. एजेन्ट डाक्टर साब– केही यस्ता डाक्टर छन्, जो सरकारीमा काम गर्छन्, निजी पनि चलाउँछन् । सरकारीमा आएका बिरामीलाई कुनै न कुनै बहानामा उता धकेल्छन् । शल्यक्रियाको मितिसमेत सरकारीमा एक वर्षपछि तोक्छन् । निजीमा जान बाध्य पार्छन् । तिनै डाक्टरले उता पुर्‍याएर एक साताभित्र शल्यक्रिया गरिदिन्छन् । बिरामी बटुल्न सरकारी जागिर दुरुपयोग गर्छन् । पैसा बटुल्न निजी व्यवसाय । सस्तो र नि:शुल्क भनिएका अस्पतालबाट सर्वसाधारणले त्यो सेवा लिन नपाउने कारण नै त्यस्ता डाक्टर साब हुन् ।
३. कमिसन डाक्टर साब– कतिपय डाक्टरको ध्यानै ‘कमिसन’ मा हुन्छ । औषधी सिफारिस गरेको, ल्याबमा लेखिदिएको सबैतिरबाट निश्चित मात्रा आउँछ । जति धेरै परीक्षण गरायो वा जति महँगा औषधी चलायो, उति कमाइ बढी हुन्छ । त्यहीबाट लोभिन्छन् डाक्टर साबहरू । फलत: बिरामीले अनावश्यक परीक्षण गर्नुपर्ने, नचाहिँदा औषधी खानुपर्ने, सस्तोले हुनेमा महँगो तिर्न बाध्य हुनुपर्ने स्थिति छ ।
४. टापटिपे डाक्टर साब– केही डाक्टर यस्ता
हुन्छन्, जसको ध्यान सरसामान टिपटापमा हुन्छ । सरकारी सुविधाका औषधी/वस्तुहरू बाहिर पसलमा पुर्‍याउँछन् । यहाँसम्म कि शल्यक्रियामा यति धेरै सामान मागिन्छ, जुन अधिकांश अस्पतालले आधाउधी मात्र प्रयोग गर्छन् भनेर त्यहीं कार्यरतहरू सुनाउँछन् । ती पुन: पसलमै पुग्छन् ।
५. नेम प्लेटधारी डाक्टर साब– कतिपय क्लिनिक, औषधी पसल वा निजी अस्पतालमा हेर्नुभयो भने डाक्टरका नामसँग दर्जनभन्दा बढी विशेषण जोडिएका हुन्छन् । त्यही देखेर बिरामी लोभिइन्छन् । राख्नुको लक्ष्य पनि त्यही हो । त्यस्तै आफूलाई ‘अब्बल’ देखाउनेमध्ये कतिपय नक्कली फेला परेका उदाहरणसमेत छन् ।
६. व्यस्त डाक्टर साब– केही डाक्टर राम्रा छन्, इमान्दार छन् । कुनै लोभ–लालचमा पर्दैनन् । सरकारी पदको भने ती भोका छन् । पद पाएपछि पेसाभन्दा प्रशासनले अल्झाउँछ । कोही आन्दोलन गरेर अधिकांश समय सक्छन् । बिरामी हेर्न भ्याउँदैनन् । तिनको विज्ञताको फरक उपयोगिता मात्र भइरहेको छ । उपचारमा अति कम छ ।
७. इमानदार डाक्टर साब– क्षमता, दक्षता, अनुभव सबै भएका इमानदार डाक्टर देशमा नभएका होइनन् । तिनको छुट्टै क्लिनिक छैन । आफ्नै अस्पताल छैन । सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्छन्, बिरामीको सेवामा रमाउँछन् । तिनको राजनीतिक पहुँच हुँदैन, शक्तिको नजिक हुँदैनन् । परिणाम ती पाखा लगाइन्छन् । धेरैभन्दा धेरै बिरामीको सेवा गर्ने ठाउँ नै पाउँदैनन् । कसरी लाभ लिऊन् सर्वसाधारणले ?
८. होइनन् डाक्टर साब– कतिपयलाई सबैले डाक्टर साब भन्छन् । वास्तवमा ती डाक्टर होइनन् । आफैं ‘होइन’ भन्दैनन् । डाक्टरसरह काम गर्छन् । सबैले पत्याउँछन् । अहेब, नर्सदेखि जिल्लाका अस्पतालका पियनसम्म यो वर्गमा पर्छन् । तिनको डाक्टरी पनि निकै बिकेको छ ।
विकृतिको मूल कारण रहेछ– नेपालको मेडिकल शिक्षा । यो महँगो छ । देख्दा मेडिकल कलेजका कोटा घटिरहेका छन्, शुल्क झरिरहेको छ । भित्रभित्र पहिलाभन्दा धेरै उठाउने गरी लेनदेन भइरहेको छ । जसको भार अभिभावकको काँधमा छ । हल्ला गरौं, छोरा/छोरीको डाक्टर पढ्ने अवसर गुम्ने । शुल्कको लिलाम बढाबढ चलिरहेको छ । सरकारचाहिँ जनतालाई मूर्ख बनाएर भन्छ– डा. गोबिन्द केसीको आन्दोलनले स्वास्थ्यमा गतिलो थिति बसिसकेको छ । अनि, ‘बुद्धिजीवीहरू’ थप्छन्– अब एकदुई वटा अनसन बसिदिए भने यो क्षेत्र पूरापूर विकृतिरहित हुनेछ ।
महाखर्च गरेर बन्ने डाक्टरको सरकारी तलब भने अति कम छ । लप्पनछप्पन नगरे जिन्दगीभरि पढाइ खर्च उठाउनै हम्मे पर्छ । विकृतिका जड पढाइमा प्रतिस्पर्धाभन्दा नियतवश ‘कार्टेलिङ’ गराइनु, जनशक्तिको आर्थिक मूल्यांकन नहुनु, सेवा क्षेत्रलाई नाफामूलक व्यवसायभन्दा छुट दिइनु, नीति/नियम/अनुगमन फितलो हुनु मुख्य हुन् । घर–घरमा चलाइएका अस्पतालतिर कसैको नजर परेको छैन । तिनले गुणस्तरको ‘ग’ सम्म पालना गरे/नगरेको कसैले हेरेको छैन । कोठा–कोठामा राखिएका क्लिनिकमा सरकार पुगेकै छैन । मेडिकल कलेजलाई नियमन गर्नेतर्फ सुगा रटाइ कुरा हुन्छ, अन्य स्वास्थ्य संस्था चटक्कै बिर्सिइन्छ । त्यही भएर धेरैथरि डाक्टर साब थपिइरहेका हुन् । खोज्दै जानुभयो भने जँचाउने कोही पाउनुहुन्न । किनकि, राम्रा डाक्टर हाम्रा (सर्वसाधारणका) छैनन्, हाम्रा डाक्टर राम्रा छैनन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७३ ०८:२४